Chigo – Igbo Services
Chigo 134 posts 0 comments
. Chi bụ ike karịrị mmadụ ma ọ bụ ike karịrị nke mmadụ na-enweghị ahụ mmadụ. A na-eji ihe onyonyo na-anọchi anya ike ndị dị otú ahụ. Ihe oyiyi ma ọ bụ akara dị otú ahụ nwere ike ịbụ ihe nwụrụ anwụ ma ọ bụ ihe dị ndụ Ụlọ chi …
Ihe nrite nke nrụpụta: Onye ndu Naijiria kwusiri ike mkpa mmụta dị.
Onyeisiala Muhammadu Buhari arịọla ndị Academic Staff Union of Universities (ASUU) ka ha leba anya na ọnọdụ ụmụakwụkwọ na-akpa ma kwụsị ọrụ ya na-aga n'ihu maka ọdịmma obodo. Onye isi ala ahụ gwakwara ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ…